Ballamihii uu qaaday madaxweyne Farmaajo Maxaa Ka Hirgalay |
Ballamihii uu qaaday madaxweyne Farmaajo Maxaa Ka Hirgalay
Waxaa maanta laba sano jirsatay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo la doortay 8-dii bishi Febraayo ee sannadkii 2017-kii, iyadoo wali ay shacabku isweydiinayaan waxa ka hir galay ballan qaadyadii uu madaxweyne Farmaajo sameeyay markii uu xilka u taagnaa.
Cid walba oo dhageysatay khudbadii uu barlamaanka ka jeediyay Madaxweyne Farmaajo markii uu ahaa musharaxa, waxay hadalkiisa ka dheehan kartay waxyaabao badan oo ay adag tahay in laga hir galiyo Soomaaliya, kuwasi oo madaxweynaha uu ballan qaaday, balse dhaqan-gelintoodu wali laga dhowrsugayo inkastoo qaarkood waqtigii uu qabsaday la dhaafay.
4 sano waa xilliga guud ee ay heysato dowladda, ka hor inta aan doorasho kale la qabanin, haddana waxaa gudubtay 2 sano oo wakhtigaas kalabarkiis ah.
Dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab
Amniga wuxuu ka mid ahaa qodobbada ugu waaweyn ee uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku ol’oleynayay, xilligii uu musharraxa madaxweyne ahaa.
Waxyaabah ugu horeeya ee tusaalaha loo soo qaadan karo, aadna loo xusuusto ayaa waxaa kamid ah ballantii uu qaaday oo ahayd soo afjaridda dagaal ka ka dhanka ah kooxda Al Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu khudbadda baarlamaanka ka jeedinayay xilligii uu musharaxa madaxweyne ahaa wuxuu sheegay iney sameyn doonaan dadaallo lagu cirib tirayo dhaqdhaqaaqa Al Shabaab.
Hase ahaatee, isagoo madaxweyne ah, mar uu khudbad ka jeedinayay munaasabaddii xuska sannad guuradii 57-aad ee aasaaska ciidanka xoogga Soomaaliya, 12-kii bishii Abriil ee sannadkii 2017-kii, wuxuu wakhtiyeeyay xilliga looga adkaan karo kooxda Al Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda Soomaaliya.
“Ciidan aan lahayn shacab ma guuleysan karo. Ciidanku wuxuu guuleysan karaa markii uu ogyahay inuu heysto taageerada shacabkiisa iyo dowladdiisa. Annagu haddaan qeybteenna la imaanno, oo dhankii dowladnimada ah, oo dhameystireysa wax walba oo loo baahan yahay, shacabkana ay garab istaagaan, waxaan xaqiijineynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka uga cirib tirno, hadduu Ialaahey yiraahdo”.
Balse ballan qaadkan, inkastoo uu shacabka dadaalkooda qeyb uga dhigay, ma suurtoobin wali.
Abaalmarimnta dadka soo sheega qaraxyada
Madaxweyne Farmaajo waxaa kale oo uu barlamaanka hortiisa ka ballan qaaday in qofkii soo sheega maclumaad la xiriira cidda fulisa qaraxyada dhaqdhaqaayada amni darrada la siin doono abaalmarin.
“Dagaalakan waa dagaal dhab ah, waa dagaal xaq ah, sirdoonka oo la xoojiyo aqoontooda, waxaan aaminsanahay in baabuurta la qarxinayo ee lagu weerarayo huteelada shacabka na leynay in wax laga qaban karo, waxaa wax looga qaban kara na ay tahay in hal malyan oo doolar bil walba meel loo dhigo, qofkii soo sheega baaburkaasi qarxayana boqol kun oo doolar la siiyo, hadii uu rabana dibadda loo diro”, Ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa xiligaasi sidoo kale ballan qaaday in haddii la doorto ay dowladiisa dib u dayac tiri doonto dhismayaasha ku burbura qaraxyada Al Shabaab, sidoo kalena dadka ku dhinta qaraxyada Shabaab magdhaw lasiin doono.
Balse dhammaan ballan qaadyadan fulintooda wali lama soo tabinin, iyadoo hadda ay dowladdu jirto muddo 2 sano ah.
Dhanka musuqmaasuqa, khudbaddii madaxweyne Farmaajo ee baarlamaanka, ka hor inta aan madaxweynaha loo dooranin, wuxuu ku sheegay in Soomaaliya ay 10-kii sano ee lasoo dhaafay meel hoose uga jirtay liiska waddamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka, wuxuuna ballan qaaday inuu arrintaas wax badan ka baddali doono, haddii xilka uu raadinayay loo doorto.
“Sannadkii 10-aad, waddamada ugu musuqmaasuqa badan adduunka waxaan uga jirnaa lambarka 176, waddanka ugu horreeya na waa Denmark, maxaa marka noo diiday inaan Denmark la tartanno”, ayuu yiri Farmaajo.
Hadda oo uu Soomaaliya 2 sano madaxweyne ka yahay, war bixintii ugu dambeysay ee ay hay’adda Transparent internatuional soo saartay waxay ku sheegtay in sannadkii 2018-ka ay Soomaaliya lambarka ugu hooseeya ka gashay waddamada uu musuqmaasuqa hareeyay.
Wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland
Tan iyo markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa hakad galay wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somnaliland, kuwaasi oo soo socday tan iyo dowladii Shariif Sheekh Axmed.
Inakstoo aysan jirin sabab rasmi ah oo ku aaddan arrintaasi ayaa haddana Somaliland waxay sheegtay in wadahadal iska daaye ay dowladda Farmaajo ku eedeeyeen inay “cunaqabateesay” Somaliland.
Safarada badan ee dibadda
Markii uu musharraxa ahaa Farmaajo wuxuu khudbaddiisii baarlamaanka ku sheegay in haddii la doorto uu yareyn doono safarrada dibadda, taas baddalkeedana wixii safar dibad ah ay ku shaqo lahaan doonto wasaaradda arrimaha dibadda oo kaliya.
Dowladdii ka horreysay ayuu ku dhaliilay iney safarradeeda ka baxsan wasaaradda arrimaha dibadda aad u badnaayeen.
2 sano oo lasoo dhaafay iyo 2 sano oo harsan
Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane, oo horay u soo noqday wasiir iyo xildhibaan, haddana ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Amniga ee Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in waxyaabo badan oo dowladda Farmaajo laga filayay aysan sidii loo filayay noqon.
Image captionCabdiqaadir Dhaqane oo ka faallooda arrimaha Siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, wuxuu horay usoo noqday wasiir iyo xildhibaan
“Soomaalidu waxay tiraahdaa ‘la mood, noqonse weyday’, madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay wuxuu heysatay shacbiyada faro badan, qof walbana wuxuu lahaa ‘Farmaajo ii geeya’ laakiin wixii oo idil hadda wuu lumiyay, sidii la moodayay iyo sida uu noqday waa kaaf iyo kala dheeri, dhammaan ballan qaadyadiisiina waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay”, ayuu yiri Dhaqane.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinkii ay dowladda Farmaajo faraha la gashay 2-dii sano ee lasoo dhaafay, wuxuuna Cabdiqaadir Dhaqane yiri “Waan ognahay sida uu noqday xiriirkii arrimaha dibadda Soomaaliya iyo sida ay hoos ugu dhacday siyaasaddii arrimaha dibadda gaar ahaan waddamada khaliijka, waxaa waddanka laga eryay Haysom oo ka socday xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay, suuqii siyaasadda arrimaha dibaddana wuu ka xirmay Soomaaliya. Dhanka gudahana, waxaan la soconnaa inuu ku fashilmay wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland”.
Cabdiqaadir Dhaqane ayaa intaas ku daray in Madaxweyne Farmaajo uu wax hagaajin karo muddada 2-da sano ah ee ka harsan maamulkiisa.
“Aniga ilama aha inuu sidaas sameynayo, laakiin 2-da sano ee u hartay wax wuu ku qaban karaa haddii uu wax qabad usoo jeesto isla markaana uu dhinac iska dhigo siyaasaddii gurracneyd ee ku dhisneyd aargoosiga oo uu dib u heshiisiin sameeyo”.